SAWIRO IYO MUUQAAL: Duufaan roobaadka oo musiibooyin ka dhalisay Spain | Saadaasha Shabakadda
Totana (Murcia). Sawir - Totana.es
Shalay waxay ahayd maalin aanaan si fudud u ilaabi doonin. Roobab ka badan 120l / m2 ayaa ka tagay qaar badan oo ka mid ah waddooyinka oo dhan koonfur-bari ee jasiiradda iyo Jasiiradaha Balearic gebi ahaanba fatahaad Laakiin biyaha kaliya maahan dhibaato, sidoo kale dabaysha.
Waxaa jiray waqtiyo markii duufaannadii ugu xoogga badnaa ayaa qarxay in ka badan 70km / saacaddii, oo ku darsaday roobabkii cuslaa, waxay u rogtay wixii si fudud u noqon lahaa Axad daruur ah, oo noqotay Axad ay inbadan oo naga mid ahi ku qasbanaadeen inay qaataan xaaqin si ay uga soo saaraan biyaha guriga soo galay. Kuwani waa fiidiyowyadii ugu cajiibka badnaa iyo sawirradii xilli-roobaadka inaga tagay.
1 Maxaa sababay duufaantan?
3 Sawirro iyo fiidyowyo
Maxaa sababay duufaantan?
Xaaladda Hawada waxay ahayd sidan soo socota:
Qiyaastii 5500 mitir oo dherer ah, DANA waxaa la sameeyay Diseembar 17, taas oo ah, waxa loo yaqaan Qaboojin Qabow ama Niyad jab Gooni ah oo Heerarka Sare ee Badda Dhexe, gaar ahaan dhanka Waqooyiga Afrika. Tan macnaheedu waa taas dherer ahaan waxaa jiray boorso hawo qabow badan tan hareeraheeda oo ahayd cadaadis hoose.
Koonfur-bari ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic waxaan ku leenahay a nidaamka cadaadiska oo hooseeya kaasoo soo jiita hawo qoyan dariiqa dheer ee badda oo ay qaado dabaysha bari, sidaas darteed sameynta qulqulka hawo qoyan oo tiro badan oo biyo di'in ah ama, haddii si kale loo dhigo, webi hawo leh. Wabigaan wuxuu u dhaqaaqay dhanka Valencia, Murcia, bariga Almería iyo Jasiiradaha Balearic.
Marka, iyadoo lagu darayo dhammaan arrimahan, xaalado wanaagsan ayaa loo abuuray inay ku dhacaan wax ka badan 120l / m2 saacado yar gudahood qodobbada qaarkood. Asal ahaan, AEMET waxay soo saartay ogeysiis oranji ah oo wali shaqeynaya waqtiga daabacaadda maqaalkan.
Bulshada Valencian, Murcia iyo Jasiiradaha Balearic, roobabku waxay ahaayeen kuwo mahiigaan ah oo sababay daadad. Iskuulo badan ayaa maanta loo xiray inay awoodi waayaan inay galaan, iyo Murcia in kabadan 350 qof ayay ahayd in laga badbaadiyo gawaarida iyo guryaha. Almería, roobabkii xoogga badnaa ayaa ku qasbay hawlgelinta Qorshaha Degdegga ah.
Laakiin, daadadka ka sakow, nasiib daro waa inaan sidoo kale ka hadalnaa marxuumka. Ku meel gaar ah ayaa dilay saddex qof.
Sawirro iyo fiidyowyo
Waa kuwan sawiradii iyo fiidiyowyadii duufaantii na reebtay:
Wadada gebi ahaanba fatahay ee Orihuela (Alicante).
Sawir - Morell
Laba shaqaale ah oo isku dayaya inay qol ka qodmaan god ku yaal wadada Teniente Flomesta, ee Murcia. Sawir - EFE
UME waxay xarunteeda ka dhisteen Los Alcázares (Murcia), halkaas oo dad badan ay ahayd in laga saaro.
Sawirka - Felipe García Pagán
Gaari xamuul ah oo ku yaal magaalada Los Alcázares, oo ka mid ah magaalooyinka ay sida weyn u saameysay.
Los Alcázares, ayaa daad qaaday.
Wadada Daadadku ku daateen ee Ses Salines (Mallorca), saaka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » SAWIRRADA IYO MUUQAALKA: Duufaanta roobka wata ee musiibooyinka ka dhalisa Spain
Los Alcáceres waa magaalo ku taal gobolka Mar Menor. Webiga Segura wuu ka fog yahay halkaas. Waxaan ku idhi cinwaanka sawirka UME.
Yaraynta cunista hilibka, oo kamid ah furayaasha ladagaalanka isbedelka cimilada